Villa Somalia oo hal arrin ku amartay Hogaamiyayaasha maamul Goboleedyada - Hablaha Media Network
Villa Somalia oo hal arrin ku amartay Hogaamiyayaasha maamul Goboleedyada
HMN:- Warar soo baxaaya ayaa sheegaya in Hogaamiyayaasha maamul Goboleedyada dalka lagu amray in guddiga qabanqaabada howlaha shirka London soo mariyaan warbixinada kooban oo ay ugu tallo galeen shirka furmaaya 11ka May.
Hogaamiyayaasha ayaa la sheegay in loo kala diray fariimo looga dalbanaayo in qoraaladooda ay soo mariyaan DFS, si looga saxo wixii khaladaad oo ku dhibaato u keeni doona midnimada Somalia.
Qoraalada ay diyaarsadeen Hogaamiyayaasha ayaa la sheegay in la waafajinaayo kuwa Madaxweynaha JFS Maxamed C/llahi Farmaajo uu u diyaarsaday shirka London.
Hogaamiyayaasha maamulada ayaa dhowr maalin ka hor lagu qanciyay inay la jaanqaadan DFS oo aysan ka weecan xeendaabka mowduucyada shirka.
DFS ayaa dooneysa in madasha shirka ay la tagto mowqif mideysan oo caalamka loogu muujinaayo midnimada Madaxda Soomaalida.
Waxaa lagu wadaa in Hogaamiyayaasha ay qoraaladaasi kusoo gudbiyaan ka hor inta aysan dhamaan 5-ta cisho ee ka harsan shirka.
Ma cadda waxa iska bedeli doona qorshaha maamul Goboleedyada ee lagu balamay shirka Soomaalida uga furmaaya magaalada London.